एक इन्स्टाग्राम पोस्टबाटै कति कमाउँछन् विराट? - Everest Dainik - News from Nepal
एक इन्स्टाग्राम पोस्टबाटै कति कमाउँछन् विराट?
काठमाडौं, साउन ८ । भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले इन्स्टाग्राम पोस्टको आम्दानी सार्वजनिक भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यममा जनाइएअनुसार कोहलीले इन्स्टाग्राम पोस्टबाटै लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन् । समाचारका अनुसार विराटको यो कमाईबारे उनले पोस्ट गरेको इन्स्टाग्रामको रिच लिस्टले पनि पुष्टि गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस केएल राहूलले हासिल गरे नयाँ उपलब्धि, तोडियो विराटको कीर्तिमान
इन्स्टाग्राम रिच लिस्ट २०१९ मा उनी सर्बाधिक कमाई गर्ने सूचीमा नवौ स्थानमा छन् । Hopper HQ का अनुसार विराटले एक इन्स्टा पोस्ट गर्दा झण्डै २२ लाख नेपाली रुपैयाँ पाउँछन् । अर्थात् २१ लाख ८० हजार ५५९ रुपैयाँ पाउने गर्छन् । इन्स्टा पोस्टबा सर्बाधिक कमाई गर्ने खेलाडीको सूचीमा भने चर्चित पोर्चुगलका फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेका छन् ।
ट्याग्स: इन्स्टाग्राम, विराट कोहली